I-Luxury 3BR House e-Golf Course, eduze neDolobha Elidala
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Robyn
Le ndlu kanokusho engu-2500 square-foot, 3BR chalet kwakuyikhaya likaNkk. Fields ngenkathi ejwayele ukwenza amakhekhe akhe adumile lapha ePark City. Uhhavini wakhe wakudala oshintshwayo usekhona, kodwa yonke indlu ibuyekezwe ngokunethezeka: amaphansi okhuni oluqinile, usilingi ophahleni, i-oki wainscoting, imiba yeminyango yethusi yase-Italy.
Ibekwe esikhotheni sezihlahla kumgwaqo omkhulu wokuqala wePark City Golf Course, isendleleni enqamula izwe, kanye nohambo olufushane oluya eHotel Park City kanye naseSilver Star ski lift.
Isitezi sokuqala sinamamitha-skwele angama-2000 sinekhishi elikhulu, isifundo / umtapo wolwazi, igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela, igumbi lokugezela, igumbi lokuwasha, kanye negumbi lokulala eliphakeme eline-walk-in closet, kanye ne-en-suite yokugezela. Isitezi sesibili sinamagumbi okulala amabili anamagumbi okugeza e-en-suite.
Kithina, le ndawo -- iThaynes Canyon -- iyindawo engcono kakhulu yokuhlala ePark City. Ingaphandle nje kweDolobha Elidala, lapho kunendawo eyanele yamagceke angemuva nezihlahla, nokho empeleni iseduze nenkaba yePark City. Kuwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eHotel Park City, futhi kungaphansi kwemizuzu eyi-10 ukuya e-Silver Star Cafe kanye nokushushuluza.
Kulabo abavakashela ngesikhathi se-Sundance, indawo iyisu -- cishe phakathi kwe-Egypt Theatre eseNingizimu, i-Temple Har Shalom enyakatho, ne-Eccles theatre eMpumalanga. Kuwuhambo lwemizuzu emihlanu ukuya ezitobhini zamabhasi ezimbalwa.
I am the Owner/Founder of Serenity Clean LLC. I specialize in professional cleaning and property management for Airbnb and (Hidden by Airbnb) rentals in Park City, UT
Umphathi wendawo, u-Robyn, uzobe ekhona ukuze asize ngakho konke okudingayo.